Qiimaynta hab-dhaqan bulsheed dhinacyo badan leh ah ayaa badalaya istiraatiijiyad wada-xiriirka si loo yareeyo rabshadaha wada-noolaanshaha - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Isbedelada bilowga ah ee guriga waa isbadal dabeecadeed oo isbadala isgaarsiinta iyo istaraatiijiyadda ka qeybgalka bulshada ee loogu talagalay in looga hortago IPV ee Nepal. Natiijooyinka tijaabada ayaa isla markiiba waxtar u yeelan doona dowladda, kuwa aan dowliga ahayn, iyo barnaamijyada tabarucyada lagu maalgeliyo ee lala beegsanayo rabshadaha lammaanaha ama caadooyinka bulshada ee wax u dhimaya. Helitaanka daraasadda ayaa sidoo kale gacan ka geysan doonta aqoonta caalamiga ah ee ku saabsan wax ku oolnimada warbaahinta iyo ka-qeybgalka bulshada sidii istiraatiijiyad looga hortago IPV. ”
Rabshadaha lammaanaha (IPV) waa arin muhiim ah oo la xiriirta caafimaadka dadweynaha kaasoo saameeya 1 ka mid ah 3 haween ah adduunka oo idil iyo tiro aad u badan oo haween ah oo ku nool Nepal. Tobankii sano ee la soo dhaafay, siyaasad muhiim ah iyo tillaabooyin barnaamij ayaa la qaaday si wax looga qabto rabshadaha ka dhanka ah haweenka Nepal. Waxaa jira caddayn badan oo ku saabsan waxtarka xeeladaha ka hortagga rabshadaha ee aasaasiga ah. The Isbedelku wuxuu ku bilaabmayaa guriga daraasadu waxay bilaabeysaa inay buuxiso farqigaan iyadoo la adeegsanaayo istiraatiijiyad isgaarsiineed oo isbedel dabeecadeed oo bulshada dhexdeeda ah taasoo ku lug leh riwaayad raadiyaha iyo abaabulka bulshada si loo beddelo fikradaha, caadooyinka, iyo dabeecadaha sababaya falgallada IPV ee Nepal.
Magaca raadiyaha raadiyaha ayaa loo adeegsaday Isbedelku wuxuu ku bilaabmayaa guriga waa Samajhdari, oo ah Nepali isfaham isfaham. Samajhdari waa riwaayad 30 daqiiqo ah oo diiradda lagu saarayo hudheel weyn oo ku teedsan Wadada Bariga West ee ku taal Nepal. Huteelka waxaa wada laba qof oo heerarka qaranka u leh xiriir wanaagsan iyo sinnaan lab iyo dhadig. Haweeneydu waxay hogamineysaa arrimaha dhaqaalaha hoteelka, halka ninku uu daryeelo macaamiisha wuxuuna ka shaqeeyaa jikada. Hoteelkooda ayaa caan ku ah socdaalayaasha ag mara, iyo lammaanahu waxay soo dhoweeyaan jilaayaal kala duwan oo la kulma si ay ugala hadlaan uguna beddelaan sheekooyin ku saabsan dhibaatooyinka la xiriira guurka, awoodda, iyo aqoonsiga jinsiga. Codadka maxalliga ah ee foomka voxpops, wareysiyada, iyo daraasadaha kiisaska ayaa loo rogaa riwaayadaha iyadoo booqdayaashu ay imanayaan hoteelka.
Suugaanta hadda jirta waxay soo jeedinaysaa in wax ka qabadyada loogu talagalay in la beddelo caadooyinka bulshada ay si togan u saameyn karaan fikradaha shakhsiyadeed iyo dhaqannada ku xeeran IPV. Wax ka qabashada barnaamijyada raadiyaha waxay soo bandhigeen aqoon sare iyo wacyigelin ku saabsan IPV, hoos u dhac ku saabsan aqlaaq xumada iyo kordhinta go'aan qaadashada wadajirka ah ee qoyska iyo wada xiriirka ku saabsan rabshadaha lammaanaha iyo galmada. In kasta oo aan daraasadihii hore baarin baaritaanka doorka raadiyaha ee kahortagga ama yareynta IPV ee Nepal, riwaayadaha raadiyaha ayaa la muujiyey inay saameyn ku leeyihiin isbeddelka dabeecadda ee la xiriirta dabeecadaha kale ee caafimaadka, sida ka faa'iideysiga qorshaynta qoyska. Warbixintani waxay baari doontaa balanqaadka riwaayadaha raadiyaha ee ka hortagga IPV.
Soo dejiso maqaalka oo buuxa.